अध्यक्ष प्रचण्डकै अगाडी जब योगेश भट्टराईले हामी पनि गिरिजाबाबुकै उत्तराधिकारी हौ भने …. || सुनौलो नेपाल
अध्यक्ष प्रचण्डकै अगाडी जब योगेश भट्टराईले हामी पनि गिरिजाबाबुकै उत्तराधिकारी हौ भने ….
सुनौलो नेपाल – सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराइले आफुहरु पनि गिजिराबाबुकै उत्तराधिकारी रहेको बताएका छन्।
भरतपुर विमानस्थल विस्तार एवम् सुधार सम्बन्धमा भरतपुरमा आयोजित सरोकारवाला बीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले भने यो विमानस्थल गिरिजाबाबुकै पाला देखी नै छलफल भएको रहेछ त्यसमा आपत्ती छैन हामीले गरे पनि उँहाले गरेजस्तै हो किनकि हामीपनि गिरिजा बाबुकै उत्तराधिकारी हौ।
मन्त्री भट्टराईले भरतपुर विमानस्थल सधैँ जोखिममा रहिरहेको बताउदै अब त्यस्तो हुन् नदिने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थललाई आफुले बिशेष चासोका साथ हेरेको बताए ।
भरतपुर विमानस्थल जोखिममा छ, उनले भने, कि बन्द गर्नुपर्छ, कि सुरक्षित हुनुपर्छ, सधैँ जोखिममा रहिरहन सक्दैन् । उनले विमानस्थलको टर्मिनल भवन पनि अत्याधुनिक र व्यवसायीक बनाउनुपर्ने बताए ।
हेर्नुहोस सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भएको भिडियो
बिहि, भदौ १९, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस